Halista ba'an ee Muqdishooyinka 2020 (Qormadii Yuusuf Garaad) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Sidoo kale, Dowlad aan iska dhegatirin shacabka, iska-caabbin iyo difaac uun la yuururin ee isku kalsoon oo wax hubsata, xaldoonna ah ayaa iyadana loo baahan yahay.Muqdisho magaalo ma aha ee waxay noqotay magaalooyin isku ag yaal oo kala xiran. Khatar, xanuun iyo xanaaq is barkaday ayaa dhex jiifa. Xal, waliba dhakhsa ah ayay u baahan tahay.
Bartamaha Xamar Weyne iyo Shingaanni waxaa ku habsaday, nuurkana ka qaadayLabada xeyndaab ee waaweyn ee midna uu ootay Gobolku midna ay ooteen Isbahaysiga Maaliyadda iyo Bankiga Dhexe. Intuba waxay garan waayeen waddooyinka gaaggaaban ee hor iyo hareera mara in ay dayactiraan. Arrintaasi waxay naafeysay farasmagaalaha Muqidishadii loo yiqiin magaalada hoose.
Isla Xamar Weyne iyo Xamar Jajab waxaa waddada xeebta goostay Isbahaysiga Xabsiga Dhexe iyo Garsoorka, taas oo dhib ka dhigtay in Suuqa kawaanka uu shacaku ka adeegto.
La isma weydiin in cabsida intaa le’eg ee nolosha caasimaddu ay socon la’dahay ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay cid kasta oo cadow ku ah dadweynaha Soomaaliyeed ee Muqdisho.
Previous articleCiidamada Milateriga oo War kasoo saaray Dagaalkii ka dhacay degaanka Xaaji Cali (Waxaan dilnay 15 Shabab ah…)
Next articleMadaxtooyada Somalia si yaab leh uga jawaabtay Cabashadii Hooyo sheegtay inay Gabadheeda afduubteen Ciidamada Madaxtooyada
Akhriso: Taariikh Nololeedka Danjire Marxuum Ciise Dheere: Odaygii Diblomaasiyiinta
Shirkadda Buruuj oo si Sharci ah u yeelatay Dhul lagu qabsaday oo ku yaalla degaanka Jaziira